microsoftword ကနေ pdf ပြောင်းရင် — MYSTERY ZILLION
microsoftword ကနေ pdf ပြောင်းရင်
microsoftword ၂၀၀ ၃ ကနေ pdf ပြောင်းရင်မြန်မာစာလုံးတွေပြောင်းကုန်လို ့ပါ.မြန်မာစာတမျိ ုးထဲ
့ရိုက်တာမဟုတ်ပဲ တခြားဘာသာတွေနဲ ့တွဲရိုက်ထားတဲ ့ဟာမျိ ုးပါ..ဥပမာ.ဂျပန်စာ.အင်္ဂလိပ်စာ.မြန်မာ ၃မျိ ုးကို
အတူတူ ထည် ့ရိုက် ထားပြီး word file ကနေ pdf ပြောင်းတဲ အခါမျိ ုးမှာ မြန်မာစာလုံးတွေဟာစာလုံးပုံတွေပျက်ကုန်ပြီး ရိုက်ထားတဲ ့အတိုင်းမပေါ်တော ့ပါဘူး.အဲဒါကိုမြန်မာစာတွေ word
မြန်မာစာက ဘာ font လဲ.. နောက်ပြီး PDF ပြောင်းဖို့ ဘာ software သုံးလဲ ???
pdfcreator သုံးလိုက်ပါ.. freeware ပဲ... သုံးရတာလဲအဆင်ပြေတယ်..
word ကနေ pdf ပြောင်းချင်တဲ့အခါ Print နှိပ်ပြီး.. Printer နေရာမှာ Pdfcreator ကိုရွေး ပီးထုတ်လိုက်ရုံပဲဗျာ..
အဲဒါလေးကိုသုံးကြည့်ပါလား။အဲဒါကတခါတည်း MS Office Suite ထဲမှာတခါတည်း Plugin အနေနဲ့သွားပြီးချိတ်ထားပေးပါတယ်အဲဒါကြောင့် MS to pdf, pdf to MS ကိုပြောင်းလို့လွယ်ကူ
အဲတာလေး သုံးကြည့်ပါလား.. :d
ကွန်မကောင်းတေးလို ့နောက်ရက် မှ တင်ပေးမယ်နော်.. :106:
ကိုလဲ သုံးကြည့်ပါလား ဗျ
အောက်မှာ ကျွန်တော် ifile.it မှာ တင်ပေးထားပါတယ် .. ဆိုဒ်က 6.36 MB ရှိပါတယ် .. full version ပါ serial number ပါပါတယ် .. Install လုပ်လိုက်ရင် .. word ထဲမှာ toolbar လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .. Save as လုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ .. Setting ထဲမှာ တော့ resolution တွေ ဘယ်လောက်နဲ့သိမ်းမလဲ(များရင်တော့ Clear တော့ဖြစ်တယ် ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးတယ်) ဆိုတာရွေးပေးလိုက်ပါ.. အစ်ကိုက တောင်းနေတာ နှစ်ရက်သုံးရက်ရှိပြီထင်တယ်.. ကွန်ကလည်း သိ တဲ့အတိုင်း ပေးချင်ပေမဲ့ .. ပေးမရဘူးဖြစ်နေတယ်.. အဆင်ပြေပါစေ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီတစ်ခုကိုတော်တော်ကြိုက်တယ် စာတွေလည်းမပြောင်းသွားဘူးတခြားလည်း convert လုပ်လို ့ရသေးတယ်
ဒါက portable edition ပါ